कोरोना भाइरस : लक्षण नभएका मानिसबाट पनि सर्न सक्छ !::Nepal's Digital Newspaper
कोरोना भाइरस : लक्षण नभएका मानिसबाट पनि सर्न सक्छ !
मङ्ल, चैत्र ११, २०७६
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको लक्षण नदेखिएका मानिसबाट यो भाइरस सरेको पाइएको छ । चिनियाँ समाचारपत्र द साउथ चाइना पोष्टले उल्लेख गरे अनुसार चिनियाँ तथ्यांकले एक तिहाइभन्दा बढी मानिसमा यो भाइरसको संक्रमणको लक्षण नै नदेखिएका मानिसबाट सरेको हो । यसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा थप चुनौती थपिएको छ ।
अहिले कोभिड–१९ का बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । यस्तोमा चीनभन्दा बाहिर अझै पनि धेरै मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको पहिचान हुन बाँकी रहेको हुनसक्ने विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।
युरोपेली युनियन ९ईयू० को प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि इटालीमा ४४ प्रतिशत संक्रमितमा भाइरसको कुनै लक्षण देखिएको छैन । तर अझै पनि मुलुकमा धेरै क्षेत्रमा लक्षण नदेखिएका मानिसहरुलाई परीक्षण गरिएको छैन ।